चन्दसँगको सहमतिमा हतियार व्यवस्थापनबारे बुँदा नदेखिँदा गम्भीर छाैं : नेता केसी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
चन्दसँगको सहमतिमा हतियार व्यवस्थापनबारे बुँदा नदेखिँदा गम्भीर छाैं : नेता केसी
फाल्गुन २१, २०७७ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीचको सहमति सकारात्मक भए पनि हतियारको विषयमा केही नबोल्नुले शंका बढाएको बताएका छन् ।
शुक्रबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै नेता केसीले भने, ‘सम्झौता सकरात्मक हो । तर तीन बुँदे सहमतिमा हतियार व्यवस्थापनको कुरा देखिएन यसमा हामी गम्भीर छौं ।’
चन्द समूहसँग हतियारै छैन भन्ने कुरा नभएको उनले बताए । ‘ठाउँठाउँमा सरकारले पक्रेको छ । तर सहमतिमा यसबारे किन मौन ?’ नेता केसीको प्रश्न थियो । सम्झौताका कारण पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउन नहुने उनले बताए ।
‘कांग्रेसको चाहना यत्ति हो । नभए शान्तिको विकल्प छैन र हिंसाको भविष्य छैन भन्ने मान्यता राख्ने हामीले सम्झौतालाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक मान्छौं’ नेता केसीले थपे ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ १८:३५
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्‍न- विप्लवका हतियार राज्यलाई बुझाउने बुँदा खोइ ?
काठमाडौँ — कांग्रेस प्रवक्ता विश्‍वप्रकाश शर्माले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सहमति गर्दा हतियार बुझाउने बुँदा नदेखिएको भन्दै सरकारसँग प्रश्‍न गरेका छन् ।
शुक्रबार ट्विटमार्फत प्रवक्ता शर्माले राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्‍न गरेका हुन् । 'प्रचण्ड आउँदा `खोलाले बगायो´ थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ प्रधानमन्त्रीज्यू ?'
प्रवक्ता शर्माले हतियारबारे उठेको प्रश्‍नको जवाफ सिंगो देशलाई चाहिने पनि बताएका छन् ।
प्रचण्ड आउँदा `खोलाले बगायो´ थोरै हतियार,
विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुंदा खोइ @PM_Nepal ?
सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ !!
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 5, 2021
प्रवक्ता शर्माले चन्द समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने सहमतिको भने स्वागत गरेका छन् ।
सहमतिलाई स्वागत l ०२८ मा केपि-सिपि,०५२ मा प्रचण्ड-बाबुराम,अहिले विप्लव-प्रकाण्ड l `रेड बुक´, नाम र काम उस्तै,परिणाम उस्तै !
नेपालको पुरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजको मितिमा केवल एक प्रश्न- कम्युनिस्ट दर्शनका नाममा कोहि नेपाली अब मारिने छैनन्,साझा उद्घोष गर्ने बेला भएन कमरेडहरु ?
चन्द समूह शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिमा आउने सहमति पत्रमा शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक समारोहमा हस्ताक्षर भए पनि हतियार बुझाउनेबारे बुँदे उल्लेख छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता अनिल शर्माले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, 'हतियार त अहिले सबैसँग छ । कांग्रेससँग पनि, कम्युनिस्टहरूसँग पनि । प्रचण्डले पनि त्यत्रो दसौं वर्ष हतियार उठाए, आफूहरूसँग भएका सबै हतियार बुझाएका छैनौं भनेर उनीहरू नै भन्छन् । कर्णालीमा बगेका हतियारका कुरा पनि छन् । त्यसकारण हतियार त घरघरमै छन् नि, के ठूलो कुरा भयो र ?'
एसएलआर, सकेट बम, ह्यान्ड ग्रिनेडलगायत हतियार तथा बम पनि बरामद गरिएका थिए ।
२०७६ जेठ १३ गते गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा चन्द समूहसँग ४ वटा कम्पनी रहेको सूचना आफूसँग रहेको बताएका थिए । चार वटा कम्पनी रहेको समूहसँग हतियारको संख्या पनि उलेख्य भएको सरकारी आकलन छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७७ १८:२६